ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း မင်္ဂလာပွဲ ၄ ပွဲ ဆောင်မယ် ......... ~ Latha Mobile 0945 000 1727
Latha Mobile 0945 000 1727
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း မင်္ဂလာပွဲ ၄ ပွဲ ဆောင်မယ် .........
6:49 PM ko pae Lay No comments
သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပွဲ ၄ ပွဲတိတိ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ မင်္ဂလာသတင်းတွေဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝ အတိုင်း အခုလည်း ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ မင်္ဂလာပွဲက ဒီနှစ်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ မင်္ဂလာပွဲ သတင်းတပုဒ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာ “အာဘွား” ဆိုတဲ့ တတိယမြောက် တေးစီးရီး CD ထွက်ရှိထားတဲ့ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းဟာ သူ့မင်္ဂလာပွဲကို ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရဖြစ်အောင် ချစ်သူများနေ့မှာ ရွေးချယ်ကျင်းပခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“၀ိုင်းစုတို့တတွေ တိုင်ပင်ပြီး မင်္ဂလာပွဲ ၄ ပွဲလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကို မင်းကွန်းမှာ လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်၊ နောက်ပြီး မင်္ဂလာလက်မှတ် ရေးထိုးပွဲကိုတော့ Parkroyal Hotel မှာလုပ်မှာပါ။ မင်္ဂလာဘိသိက်ပွဲ အခမ်းအနားကို Sedona Hotel မှာလုပ်မှာဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာ ညစာစားပွဲကိုကျတော့ ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ် ဟိုတယ်မှာ လုပ်မှာပါ” လို့ သူ ပြုလုပ်မယ့် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ အစီအစဉ်တွေအကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့ လက်ထပ်မယ့် ကိုဥက္ကာမြင့်ကြူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း အမေရိကားမှာ သီချင်းသွားဆိုစဉ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလို့ ကိုဥက္ကာမြင့်ကြူက ဆိုပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မှာက မင်္ဂလာဘိသိက်ပွဲဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပွဲတွေ ပြီးတဲ့အခါ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးက အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် သီးသန့်အနေနဲ့ ဟန်းနီးမွန်းခရီး ထွက်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းက သူခံစားနေရတဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ လုံးဝပြန်ကောင်းသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဧရာဝတီကတဆင့် ဟြေပါတယ်။
“၀ိုင်းစုတို့ မင်္ဂလာပွဲပြီးရင်လည်း မိဘတွေနဲ့အတူ ဒီမှာပဲနေမှာပါ။ ၀ိုင်းစုချစ်တဲ့ အနုပညာ အလုပ်တွေလည်း ဆက်လုပ်မှာပါ။ သူက ၀ိုင်းစုအပေါ်မှာ နားလည်မှု အပြည့်ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ကုမ္ပဏီက အမေရိကားမှာ ရှိတော့ ၀ိုင်းစုတို့ သွားလိုက်၊ ပြန်လိုက် လုပ်ရမှာပေါ့။ ဒီမှာလည်း သူ ကုမ္ပဏီဖွင့်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်” လို့ သူတို့ရဲ့အနာဂတ် အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းက ဆိုပါတယ်။
Posted by Koko Zaw
Posted in: အနုပညာ ရပ်ဝန်း
Free Game Download (8)
Latha Mobile 0945 000 1727 (1)
MP3 တေးသီချင်းများ (25)
စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း (7)
တိုင်းရင်းသားများ ရိုးရာဓလေ့ (15)
ပန်းချီဆရာ များရဲ့ လက်ရာဆန်း (5)
ဖုန်း နှင့်ဆိုင်သမျှ (602)
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (18)
သဘာဝဘေး အန္တရာယ် (89)
အိပ်မက်နှင့်ပတ်သက်သော နိမိတ်များ (3)
အနုပညာ ရပ်ဝန်း (226)
သတင်းများ ရှာဖွေရန် Jun 19 (3) Jun 13 (1) Aug 22 (4) Aug 20 (2) Jul 30 (2) Jul 29 (1) Jul 25 (5) Jul 13 (1) Jul 12 (3) Jul 11 (1) Jul 10 (1) Jul 09 (7) Jul 08 (14) Jul 07 (5) Jul 06 (3) Jul 05 (3) Jul 04 (1) Jul 02 (14) Jul 01 (5) Jun 30 (7) Jun 29 (5) Jun 28 (3) Jun 27 (5) Jun 26 (9) Jun 24 (3) Jun 23 (1) Jun 21 (9) Jun 17 (1) Jun 15 (6) Jun 14 (1) Jun 11 (8) Jun 07 (14) Jun 04 (13) May 25 (8) May 22 (14) May 21 (3) May 16 (1) May 15 (10) May 14 (17) May 13 (6) May 12 (7) May 05 (2) May 02 (1) Apr 29 (3) Apr 25 (2) Apr 23 (1) Apr 22 (2) Apr 16 (14) Apr 11 (1) Apr 10 (1) Apr 09 (16) Apr 06 (1) Apr 05 (3) Mar 30 (2) Mar 29 (8) Mar 27 (1) Mar 25 (3) Mar 17 (3) Mar 14 (1) Mar 13 (4) Mar 10 (4) Mar 08 (2) Mar 07 (3) Mar 05 (15) Mar 04 (5) Feb 28 (1) Feb 26 (10) Feb 25 (1) Feb 24 (1) Feb 22 (5) Feb 20 (14) Feb 19 (5) Feb 11 (3) Feb 05 (1) Feb 04 (7) Feb 03 (3) Jan 29 (10) Jan 25 (5) Jan 24 (6) Jan 22 (10) Jan 21 (2) Jan 20 (1) Jan 19 (1) Jan 12 (2) Jan 11 (4) Jan 09 (10) Jan 08 (2) Jan 07 (8) Jan 06 (8) Jan 04 (10) Jan 03 (7) Jan 01 (4) Dec 31 (2) Dec 30 (3) Dec 29 (6) Dec 28 (5) Dec 27 (4) Dec 25 (10) Dec 24 (12) Dec 23 (4) Dec 21 (1) Dec 20 (1) Dec 19 (3) Dec 18 (4) Dec 17 (6) Dec 16 (2) Dec 15 (1) Dec 13 (9) Dec 12 (2) Dec 11 (7) Dec 10 (9) Dec 09 (6) Dec 06 (6) Dec 03 (2) Dec 02 (1) Nov 30 (3) Nov 26 (6) Nov 25 (8) Nov 24 (5) Nov 23 (3) Nov 19 (9) Nov 18 (3) Nov 17 (1) Nov 15 (2) Nov 14 (6) Nov 13 (3) Nov 12 (3) Nov 10 (1) Nov 09 (3) Nov 08 (3) Nov 07 (7) Nov 05 (9) Nov 03 (3) Nov 01 (11) Oct 31 (10) Oct 28 (3) Oct 27 (5) Oct 26 (1) Oct 25 (4) Oct 24 (7) Oct 23 (1) Oct 22 (5) Oct 21 (9) Oct 20 (6) Oct 19 (5) Oct 17 (12) Oct 16 (2) Oct 15 (4) Oct 14 (6) Oct 13 (3) Oct 11 (3) Oct 10 (3) Oct 09 (15) Oct 08 (12) Oct 05 (3) Oct 04 (3) Oct 03 (2) Sep 30 (5) Sep 29 (8) Sep 27 (8) Sep 26 (4) Sep 25 (4) Sep 24 (3) Sep 23 (4) Sep 22 (2) Sep 21 (2) Sep 17 (3) Sep 16 (10) Sep 15 (1) Sep 14 (1) Sep 13 (3) Sep 12 (4) Sep 10 (11) Sep 09 (8) Sep 08 (9) Sep 07 (3) Sep 03 (3) Sep 02 (8) Sep 01 (13) Aug 29 (7) Aug 28 (7) Aug 27 (10) Aug 26 (11) Aug 25 (5) Aug 22 (2) Aug 21 (13) Aug 19 (6) Aug 16 (4) Aug 14 (5) Aug 13 (15) Aug 12 (4) Aug 11 (2) Aug 08 (10) Aug 07 (3) Aug 06 (3) Aug 04 (7) Aug 03 (7) Aug 02 (11) Aug 01 (10) Jul 31 (3) Jul 30 (6) Jul 27 (5) Jul 26 (3) Jul 25 (6) Jul 24 (3) Jul 23 (9) Jul 21 (4) Jul 20 (7) Jul 19 (11) Jul 18 (4) Jul 15 (2) Jul 12 (9) Jul 11 (18) Jul 10 (6) Jul 09 (12) Jul 08 (9) Jul 05 (10) Jul 04 (4) Jul 02 (2) Jul 01 (12) Jun 30 (8) Jun 29 (5) Jun 27 (4) Jun 25 (7) Jun 22 (6) Jun 21 (8) Jun 19 (12) Jun 18 (16) Jun 13 (11) Jun 12 (14) Jun 11 (5) Jun 10 (6) Jun 09 (10) Jun 08 (1) Jun 06 (8) Jun 05 (24) Jun 04 (6) Jun 03 (8) Jun 02 (13) Jun 01 (14) May 31 (16) May 30 (11) May 29 (22) May 28 (5) May 27 (10) May 26 (13) May 25 (17) May 24 (5) May 23 (10) May 22 (3) May 21 (4) May 20 (2) May 19 (8) May 18 (4) May 15 (5) May 14 (4) May 13 (2) May 12 (6) May 11 (6) May 10 (7) May 09 (8) May 08 (2) May 07 (17) May 06 (4) May 05 (1) May 04 (4) May 03 (4) May 02 (7) May 01 (5) Apr 30 (9) Apr 28 (19) Apr 27 (1) Apr 26 (9) Apr 25 (10) Apr 23 (1) Apr 21 (14) Apr 20 (2) Apr 19 (6) Apr 18 (2) Apr 16 (6) Apr 14 (5) Apr 13 (8) Apr 12 (1) Apr 11 (23) Apr 10 (11) Apr 09 (3) Apr 08 (6) Apr 07 (10) Apr 06 (12) Apr 05 (15) Apr 04 (23) Apr 03 (4) Apr 02 (3) Apr 01 (12) Mar 31 (11) Mar 30 (12) Mar 29 (9) Mar 28 (6) Mar 27 (3) Mar 26 (3) Mar 25 (12) Mar 24 (11) Mar 23 (10) Mar 22 (2) Mar 21 (10) Mar 20 (10) Mar 17 (4) Mar 16 (29) Mar 15 (7) Mar 13 (15) Mar 12 (5) Mar 11 (11) Mar 10 (8) Mar 09 (20) Mar 08 (11) Mar 07 (15) Mar 06 (5) Mar 05 (2) Mar 04 (12) Mar 03 (5) Mar 02 (5) Mar 01 (2) Feb 28 (5) Feb 27 (10) Feb 26 (10) Feb 25 (6) Feb 24 (5) Feb 23 (13) Feb 22 (3) Feb 21 (2) Feb 20 (6) Feb 18 (2) Feb 17 (12) Feb 16 (8) Feb 15 (4) Feb 14 (13) Feb 11 (6) Feb 10 (3) Feb 09 (2) Feb 06 (3) Feb 05 (1) Feb 04 (10) Feb 03 (9) Jan 26 (5) Jan 24 (3) Jan 23 (2) Jan 22 (9) Jan 21 (3) Jan 20 (3) Jan 19 (2) Jan 18 (2) Jan 17 (6) Jan 16 (3) Jan 14 (5) Jan 12 (2) Jan 11 (1) Jan 10 (6) Jan 09 (5) Jan 07 (2) Jan 06 (6) Jan 04 (8) Jan 03 (1) Jan 01 (12) Dec 30 (12) Dec 29 (8) Dec 28 (14) Dec 27 (10) Dec 25 (24) Dec 24 (12) Dec 23 (2) Dec 22 (7) Dec 21 (26) Dec 20 (14) Dec 19 (12) Dec 18 (17) Dec 17 (12) Dec 16 (21) Dec 15 (33) Dec 14 (22) Dec 13 (17) Dec 12 (47) Dec 11 (28) Dec 10 (34) Dec 09 (14) Dec 08 (25) Dec 07 (30) Dec 06 (23) Dec 05 (18) Dec 04 (59) Dec 03 (62) Dec 02 (39) Dec 01 (35) Nov 30 (30) Nov 29 (16) Nov 28 (35) Nov 27 (33) Nov 26 (2) Nov 25 (20) Nov 24 (15) Nov 23 (7) Nov 22 (19) Nov 21 (23) Nov 20 (11) Nov 19 (31) Nov 18 (21) Nov 17 (34) Nov 16 (20) Nov 15 (16) Nov 13 (33) Nov 12 (14) Nov 11 (18) Nov 10 (21) Nov 09 (21) Nov 08 (3) Nov 07 (4) Nov 06 (12) Nov 05 (8) Nov 04 (6) Nov 03 (4) Nov 02 (23) Nov 01 (7) Oct 30 (13) Oct 29 (5) Oct 27 (22) Oct 25 (4) Oct 24 (16) Oct 21 (7) Oct 20 (17) Oct 19 (11) Oct 18 (21) Oct 17 (1) Oct 16 (22) Oct 15 (1) Oct 13 (1) Oct 12 (8) Oct 11 (8) Oct 10 (19) Oct 08 (2) Oct 07 (28) Oct 06 (15) Oct 05 (11) Oct 04 (12) Oct 03 (16) Oct 02 (21) Sep 30 (15) Sep 29 (10) Sep 28 (9) Sep 27 (13) Sep 26 (12) Sep 25 (19) Sep 24 (23) Sep 23 (15) Sep 22 (22) Sep 21 (13) Sep 20 (37) Sep 19 (34) Sep 18 (27) Sep 17 (23) Sep 16 (16) Sep 15 (32) Sep 14 (19) Sep 13 (30) Sep 12 (20) Sep 11 (26) Sep 10 (18) Sep 09 (22) Sep 08 (19) Sep 07 (15) Sep 06 (15) Sep 05 (20) Sep 04 (46) Sep 03 (14) Sep 02 (23) Sep 01 (26) Aug 31 (13) Aug 30 (27) Aug 29 (15) Aug 28 (43) Aug 27 (8) Aug 26 (37) Aug 25 (16) Aug 24 (36) Aug 23 (10) Aug 22 (33) Aug 21 (22) Aug 20 (24) Aug 19 (26) Aug 18 (6) Aug 17 (30) Aug 16 (26) Aug 15 (25) Aug 13 (26) Aug 12 (29) Aug 11 (38) Aug 10 (23) Aug 09 (32) Aug 08 (30) Aug 07 (12) Aug 06 (49) Aug 05 (27) Aug 03 (42) Aug 02 (26) Aug 01 (31) Jul 31 (46) Jul 30 (35) Jul 29 (9) Jul 28 (29) Jul 27 (30) Jul 26 (37) Jul 25 (37) Jul 24 (42) Jul 23 (31) Jul 22 (15) Jul 21 (1) Jul 20 (4) Jul 19 (6) Jul 18 (49) Jul 17 (27) Jul 16 (30) Jul 15 (6) Jul 14 (24) Jul 13 (25) Jul 11 (33) Jul 10 (21) Jul 09 (40) Jul 08 (16) Jul 07 (14) Jul 06 (23) Jul 05 (24) Jul 04 (17) Jul 03 (9) Jul 02 (35) Jul 01 (46) Jun 30 (1) Jun 29 (65) Jun 28 (23) Jun 27 (44) Jun 26 (38) Jun 25 (31) Jun 24 (6) Jun 23 (13) Jun 22 (60) Jun 21 (51) Jun 20 (36) Jun 19 (38) Jun 18 (62) Jun 17 (40) Jun 16 (31) Jun 15 (24) Jun 14 (47) Jun 13 (17) Jun 12 (44) Jun 11 (26) Jun 10 (48) Jun 09 (42) Jun 08 (34) Jun 07 (14) Jun 06 (19) Jun 05 (12) Jun 04 (16) Jun 03 (28) Jun 02 (11) Jun 01 (15) May 31 (36) May 30 (21) May 29 (39) May 28 (38) May 27 (23) May 26 (16) May 25 (8) May 24 (5) May 23 (32) May 22 (10) May 21 (9) May 20 (10) May 18 (30) May 17 (11) May 16 (40) May 15 (6) May 14 (23) May 13 (6) May 12 (13) May 11 (14) May 09 (21) May 08 (4) May 07 (12) May 06 (18) May 05 (37) May 04 (17) May 03 (19) May 02 (40) May 01 (41) Apr 30 (46) Apr 29 (47) Apr 28 (37) Apr 27 (3) Apr 26 (11) Apr 25 (42) Apr 24 (2) Apr 23 (2) Apr 22 (10) Apr 21 (17) Apr 20 (20) Apr 19 (40) Apr 18 (9) Apr 17 (8) Apr 16 (4) Apr 15 (4) Apr 14 (2) Apr 13 (12) Apr 12 (7) Apr 11 (11) Apr 10 (8) Apr 09 (5) Apr 08 (14) Apr 06 (10) Apr 05 (12) Apr 04 (1) Apr 03 (7) Apr 02 (3) Apr 01 (4) Mar 31 (7) Mar 30 (5) Mar 29 (1) Mar 27 (2) Mar 26 (3) Mar 24 (1) Mar 22 (3) Mar 20 (3) Mar 01 (2)
ကိုပဲလေး. Powered by Blogger.
ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မလှည့် ဘူးဟေ့
မြန်မာပြည်က ပြည်သူ့အချစ်တော် အဆိုတော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် သဇင်တယောက် အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ သတင်းကြီးလို့နေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ပျော်ပါးဖေ...
မြန်မာ မော်ဒယ်ဂဲ များ
အေးမြတ်သူ Posted: 16 May 2012 04:21 AM PDT စံရတီမိုးမြင့် Posted: 16 May 2012 04:15 AM PDT ဂျူးဂျ...
ဆက်ရက် တောင်ပံကျိုးမလေး ၏ လွမ်းဆွတ်ဖွယ် ပုံပြင် .....
by Swe Myat Hay Thi on Sunday, September 16, 2012 at 5:01am လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၈ ) နှစ်ကျော် ( ၉ ) နှစ် ခန့်အချိန...
Ye Latt Aung Kyaw Oo အချစ်ဟာ ဘ၀အတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပေမဲ့ အချစ်မရှိရင် ဘ၀မှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတွေလည်း ပျောက်ဆုံးက...
♫သင်္ကြန် သီချင်းများ♫....(Mp3 ဒေါင်းမယ်)
Posted by သန်းဦး (သားလေး) on April 11, 2012 at 7:23pm in ♪ သီချင်းများ ♪♫.DownLoad.♪♫ Send Message View Disc...
((( ၇-ရက်သားသမီးများအတွက်..တသက်စာ..ဗေဒင်..ဟောစတမ်း ))) ဟာသ
တနင်္ဂနွေ(အ၊ဥ၊သြ) အားအားယားယား ဖြစ်နေတတ်သည်။ အူကြောင်ကြား ဖြစ်နေသောသူတစ် ယောက်နှင့် မိတ်ဆွေဖြစ...
သိုးဆောင်း၏စာအုပ်များ (၂၁ အုပ်)..........................
Posted by နွေည သိုးဆောင်း၏စာအုပ်များ (၂၁ အုပ်) Google Document ...
MP3 တေးသီချင်းများစုစည်းမှူ (၁)
ခင်ရွှန်းလဲ့ဝေ Hip Hop အဆွေးသီချင်းအေးအေးလေးတွေပါအားလုံးကြိုက်ကြမှာပါ Moe(Byuhar, Thar Gyi) ငယ်သံယောဇဉ်(Tay Za MC) ...
Facebook က ဗီဒီယိုများကို Download ယူမရသူများနှင့် Photo Comment ပေးမရသူများအတွက်နည်းလမ်း.............
Facebook မှာ Download ယူလို့ လည်းရ Photo Comment လည်းရနိုင်တဲ့ ဒီနည်းလမ်းကို သေချာလုပ်ကြည့်ပါ ။ ဆော့ဝဲတွေလည်း ဒေါင်းလုပ်ယူသုံးပ...
အွန်လိုင်းကနေ ထီ တိုက်စစ်ရန် Myanmar E-Lottery
8/21/2012 10:30:00 AM Sa U Thu No comments လစဉ်လတိုင်း အွန်လိုင်းကနေ ထီတိုက်စစ်နိုင်ရန်အတွက် Myanmar E-Lottery ဆိုတဲ...
▼ 2013 (1810)
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း မင်္ဂလာပွဲ ၄ ပွဲ ဆောင်မယ် ..........
စိတ် ဖိစီးမှု အတွက် ယောဂ လေ့ကျင့်ခန်း.................
ခေါင်းအုံးစွပ်ကိုလည်း ပိုးသန့်စင်အောင် မကြာခဏ နေပူ...
► 2012 (5581)
► December (677)
► August (762)
Find more music like this on FOREVER FRIENDS ထာဝရသူငယ်ချင်းများ
အိုရ နာရ သေရဦးမည်
ဇော်ဂျီ (ဒီဇင်ဘာ ၁၉၃၅)
DVB TV Burmese Channel II
ကော်နက်ရှင် မကောင်းလဲ အွန်လိုင်းပေါ် တက်လို့ရတယ်
Powered by အောင်လေး (နည်းပညာ)
Read more: http://aunglaybc.blogspot.com/2012/11/blog-post_3442.html#ixzz2E1tGOIuL
ထိုင်း စတော့ ဈေးကွက်
Copyright © 2011 Latha Mobile 0945 000 1727 | Powered by Blogger